”Anigu ma ihi dibi soo galay dukaan Chinese!!” – Frank de Boer – Gool FM
”Anigu ma ihi dibi soo galay dukaan Chinese!!” – Frank de Boer
Raage September 28, 2016
(Milano) 28 Sebt 2016 – Frank de Boer ayaa sharraxay “sida aysan u sahlanayn” in la bedelo macallinkii hore ee Inter ee Roberto Mancini isagoo leh – “Ma noqon karo sidii dibi ku jira dukaan Chinese”.
“Talyaanigu waxay hanteen Koobka Adduunka 2006 waxayna go’aansadeen inay macallin uga yeertaan Holland,” ayuu De Boer ku yiri NOS.
“Sida cad uma socon karo sidii dibi soo galay dukaan Chinese anigoo ah nin Ducth ah oo sharraxaya sida wax loo samayn lahaa. Sababtaa darteedm tillaababa mar baan qaadayaa, mase sahlana.” ayuu raaciyay.
“Waxaan bedeley macallin Mancini, taasoo wada cadaadis badan, waayo qof kasta adiga ayuu ku eegayaa isagoo uu afkiisu furan yahay.”
Yeelkeede, De Boer wax uu ka helay baa jira intii uu joogey Appiano Gentile.
“Dadkani waa dad guuleed, sidaa darteed uma baahna inaan dabada ka riixo sidii Ajax. Halkan ciyaar fudud oo kubadda gacanta ah dadku way ku raaxaysanayaan, halka Ajax ay dadku u arkayeen wax bilaa micne ah.” ayuu yiri isagoo ka hadlaya sida ay dadku ciyaaraha u jecel yihiin.
FG: Howraartan ah ”dibi soo galay dukaan Chinese” waxaa loola jeedaa marka uu qofku sameeyo ficillo aan baaraandeg lahayn oo mararka qaar xitaa halis u keeni kara naftiisa.
Radja Nainggolan oo sugaya inuu heshiis cusub u saxiixo Roma
Rashford: Sida aan wax uga baranayo Ibrahimovic